Kulankii Baarlamaanka Somaliya oo lagu kala tagey, xilli waraaqaha mooshinka ay qaateen Xildhibaanada taageersan Madaxweynaha - iftineducation.com
Kulankii Baarlamaanka Somaliya oo lagu kala tagey, xilli waraaqaha mooshinka ay qaateen Xildhibaanada taageersan Madaxweynaha
iftineducation.com – Goor dhow waxaa Magaalada Muqdisho ku soo gaba gaboobay kalfadhi xasaasi ahaa, oo maanta ay ku yeesheen Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, xilli laba garab ay u kala qaybsan yihiin.
Xildhibanaada Baarlamaanka Somaliya ee mooshinka taageersan, ayaa waxay qaateen nuqulada mooshinka uu ka kooban yahay, si ay u soo akhristaan mudada shanta maalmood ah, ee foodda inagu soo heysa.
Xildhibanaada kale ee mooshinka dhaliilsan, ayaa la soo sheegayaa in ay iyagu jeex jeexeen, dabadeedna lagu kala dareeray fadhigii maanta ay Xildhibaanadu ku yeesheen Magaalada Muqdisho.
Guddoonka Sare ee Baarlamaanka, ayaan wax fursad ah loo siin, in ay khudbado ugu jeediyaan Xildhibaanada Baarlamaanka, marka laga reebo in Shaqaalaha Baarlamaanka ay ku amrayn inay mooshinka qaybiyaan.
Shan maalmood ka dib, ayaa waxaa lagu wadaa in Xildhibaanada Baarlamaanka ay isugu yimaadaan kulanka midkaan xigga, si horey ay ugu sii amba qaadaan arrinta mooshinka la xiriirto.
Haddii kulamada Baarlamaanka ay sidaan u sii cakirnaadaan, ayaa waxaa wax leeska weydiinayaan, sida ay ku suurta geli karto in Xildhibaanadu ay ka doodo mooshinka horyaala.